Immisa ayey ku kacaysaa tattoo-ku? Halkan ka ogow qiimaha tattoosyada | Ragga Stylish
Qolka Ignatius | | Waqtiyada firaaqada
¿Immisa ayey ku kacaysaa tattoo-gu? Kahor ogaanshaha jawaabta gaarka ah ee su'aasha, waxaan si faahfaahsan u sharraxeynaa waxay yihiin iyo sababta qiimahoodu inta badan uga sarreeyo sidii aan filaynay markii hore.
Tattoo waxaan ku fahmaynaa isbedel joogto ah oo ah midabka maqaarka uu ku abuurayo, iyadoo la isticmaalayo cirbadaha iyo maacuunta kale ee ku duree maqaarka maqaarka maqaarka. Caddaynta ugu horreysa ee tattoos waxaa laga helay mummuug ka tirsan Dhaqanka Chinchorro, laga soo bilaabo 2000 BC, oo laga keenay Peru. Tattoo-yadaas hore waxay ahaayeen kuwo fudud oo kaliya ayaa na tusay xariiq ku taal bushimaha kore ee ragga waaweyn.
In kasta oo sawirkii ugu horreeyay laga helay Peru, haddana erayga tattoo wuxuu ka yimid Samoan "tátua" oo macnaheedu yahay laba jeer garaac (habka caadiga ah ee lagu fuliyo). Waqti ka dib ereyga tattoo waxaa loo habeeyay qabiilooyinka magaalooyinka kala duwan iyo maalmahan sidoo kale waxaa loo yaqaan "Tatu" ama Tattoos. Tan dambe ayaa badanaa loo adeegsadaa kuwa ugu xiisaha badan dhaqankan.
In kastoo dad badani ay u malayn karaan si ka duwan, Tattoo-ku ma beddelo dabeecadda dadka. Dadka sameeya tattoos waxay raadinayaan inay ku muujiyaan himilooyinkooda shaqsiyadeed dhaqankan. Waqtiga laga gudbayo waxay noqotay wax iska caadi ah in la arko dad la xardhay, laakiin dhawr sano ka hor waxay had iyo jeer lala xiriiri jiray dad shaki ku jiro sumcad.
1 Noocyada Tattoo
1.1 Dhaqanka Mareykanka oo sidoo kale loo yaqaan Old School
1.2 Qurxinta ama joomatari
1.3 Dugsi cusub ama mid macquul ah
1.6 Madow & Cawlan
2 Mudnaanta tattoos
3 Ma tirtiri kartaa tattoo
4 Qiimaha Tattoo
4.3 Template, naqshad u gaar ah ama ikhtiyaari ikhtiyaari ah
4.4 Kayd Artist
5 Khataraha caafimaad
Sanadihii la soo dhaafay, tattoosku waxay noqdeen wax caadi ah waxayna noqdeen kuwa caan ku ah dadka oo aan xitaa heli karno barnaamijyo kala duwan oo telefishanka ka socda halkaasoo ay ku tusayso nidaamka iyo dhiirrigelinta dadka doonaya inay mid sameeyaan. Marka laga hadlayo noocyada kala duwan ee tattoos-yada, maahan in dhamaan Salooniyada lagu fuliyo noocan maqaarka maqaarka ay ku takhasusaan dhamaan noocyada maaddaama, sida aan hoos ku arki karno, ay jiraan tiro aad u tiro badan, laakiin halkan waxaan kaliya ku soo bandhigi doonnaa kuwa ugu muhiimsan . Caqli ahaan, nooc kasta oo tattoo ah wuxuu leeyahay qiimo, ma aha wax la mid ah in lagu dhajiyo shaxanka qolka tattoo inta loo keenayo sawir ama noo dhaaf gacmaha farshaxanka.
Dhaqanka Mareykanka oo sidoo kale loo yaqaan Old School
Waa iskudhaf midabbo dhalaalaya oo leh astaan ​​sawir ah oo ay dhiirrigeliyeen haweenka iyo badda, halkaas oo aan wax ka arki karno Haweenka baarka ah ee doobka leh ee leh dabo meeris ah oo ku yaal barroosinka maraya libaaxyada. Laakiin waxaan sidoo kale ka heli karnaa mawduuca Hindida ah ee aan ka helno gorgorrada, Cherokee ...
Qurxinta ama joomatari
Noocyada noocan oo kale ah ayaa noqday kuwa ugu caansan dadka doonaya inay soo galaan adduunkan. Badanaa waa monochromatic iyo waxay na tusayaan tirooyinka joomatari ay ku biireen goobo ama xarriiqyo.
Dugsi cusub ama mid macquul ah
Qaabkan cusub wuxuu ka bilaabmay 70-meeyadii Maraykanka gudihiisa kaas oo qaabab dhaqameed lagu soo daray kuwii hore iyo waxay na tusayaan sawirro macquul ah oo isu ekaysiinaya dhaqdhaqaaqa sawirka. Qiimaha noocyada noocan ah ee loo yaqaan 'tattoos' ayaa badanaa ka qaalisan kuwa caadiga ah, badanaa sababta oo ah tirada badan ee saacadaha ah ee ay u baahan tahay marka lagu daro isticmaalka midabbada kala duwan si loo siiyo xaqiiqo weyn shaqada.
Tattoo noocan ah wuxuu noo soo bandhigayaa laba astaamood oo waaweyn oo aynaan ka helin tattoosyada badankood: midabbo yaraaday iyo khadad la'aan. Sawirradu waxay noo soo bandhigayaan muuqaal biyo leh sida inaan ku rinjiyeeyno midabbada biyaha (sidaas darteed magaca) waxayna noo soo bandhigayaan khadad madow oo na tusaya qaabka sawirka.
Noocyada noocan ah ee loo yaqaan 'tattoos' ayaa ah waxa aan ka heli karno tiro aad u tiro badan oo ka mid ah goobaha wax lagu sawiro, tan iyo waxay ku saleysan yihiin arrimo in qofka uu sawirayo uu dooran karo. Noocyada noocan oo kale ah ayaa laga yaabaa inay na xusuusiso qayb ka mid ah qoraallada ay ku qoran tahay tilmaamku. Badanaa waa iskudhac la'aan iyada oo aan lahayn wax hoos ah ama wax lagu shaandheeyo.
Madow & Cawlan
Tani waa tattoo ugu badan ee dalal badan laakiin tartiib tartiib ayuu lumiyay xiisihiisii ​​badnaa, maxaa yeelay nama siiso fursado badan oo habeyn ah. Tattoo noocan ah waxay na siinayaan sawiro fudud, calaamado, xarfo, tirooyin diimeed ama joomatari iyo waliba kuwa aan la taaban karin. Kaliya madow ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo. Tattoo noocan ah ayaa ah midka ay doorteen isticmaaleyaasha aan si cad ugu cadayn waxa ay doonayaan inay sameeyaan laakiin doonaya inay soo galaan adduunka tatooyada.
Si ka duwan sida ugu badan ee loo yaqaan 'tattoos' ee ka yimaada Mareykanka, qaabka Dotwork waa asal ahaan UK oo sida magaceedu tilmaamayo (dot waa dhibic af ingiriis ah) waxaa loo turjumi karaa tolmoon taas oo lagu garto dhibic joogto ah oo aan midabkeeda la isticmaalin wakhti kasta, kaliya madow ayaa la isticmaalaa. Qaabkan tattoo waxaa lagula talinayaa dhammaan kuwa doonaya inay bartaan sida loo sameeyo tattoos.
Si ka duwan sida ugu badan ee loo yaqaan 'tattoos' halka irbadda leh midabbada loo isticmaalo, kuwa nooca burushka waxay isticmaalaan nooc burush ah, sidaa darteed codsigeedu aad ayuu uga dhib badan yahay midka soo jireenka ah, markaa waa wax aad u badan in la arko tattoos tayo aad u liita. Farsamadan waxaa badanaa loo adeegsadaa in lagu sameeyo tattoos waaweyn halka aagga la daboolayo ay aad u ballaaran tahay.
Adkaysiga tattoosku waa inuu ku xirnaadaa waayo-aragnimada farshaxanka tattoo. Sida caadiga ah, midabada la isticmaalay waxaa lagu soo bandhigaa maqaarka hoostiisa, laakiin waxaa jira lakabyo kala duwan oo maqaarka ah, intay sii qoto dheer tahay, ayay sii waari doontaa waxay sii socon doontaa sannadaha. Haddii, dhanka kale, kuwan si qoto dheer loo marsado, waqti ka dib way libdhi doonaan oo midabkoodu wuxuu ku lumi doonaa maqaarka. Haddii aan caddeynno inaan dooneyno inaan sameyno tattoo oo aan dooneyno inay sii socoto cimri dhererkiisa, waa inaan tagnaa saloon leh khibrad badan, haddii kale waxaan dooneynaa tattoo-geenna aan jecel nahay inuu noqodo mid cakiran.
Ma tirtiri kartaa tattoo
Haddii tattoo loo sameeyay si sax ah oo uu ku jiro maqaarka maqaarka, ikhtiyaarka kaliya ee looga takhalusi karo waa iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka laysarka. Haddii, dhinaca kale, tattoo uusan gaarin maqaarka maqaarka, laakiin uu ku jiro lakabyo dusha sare ah, oo dib u cusbooneysiinta lakabka kore ee maqaarka, tattoo ayaa si tartiib tartiib ah u baaba'aya, in kasta oo had iyo jeer ay jiri karto raadad u baahan adeeg laser si uu u saaro gebi ahaanba.
Laysaarku runti kama saarayo khadadka sawirkaWaxa ay qabato waxay u kala jabtaa qaybo yaryar si ay maqaarka uga nuugaan oo hadhow looga tirtiro nidaamka qalliinka. Sanadihii la soo dhaafay, qiimaha ka saarista tattoo ayaa wax badan hoos u dhacay, maadaama sida ku cad sahannada qaar ee u dhexeeya 80 iyo 90% dadka isticmaala ee soo maray qolka tattoo ay doonayaan inay ka takhalusaan noloshooda oo dhan.
Sida loo hagaajiyo ama looga saaro sawirka
Qiimaha tatuuyuhu aad ayey isu beddelaan iyadoo ku xiran inta badan cabbirka iyo midabada loo adeegsaday in la sameeyo, laakiin ma aha waxyaabaha keliya ee saameeya qiimaha. Caqli ahaan, oo leh cabbirro iyo midabyo waaweyn, qiimaheeda ayaa kordha. Laakiin si loo xisaabiyo kharashka ku baxa tattoo waxaan ku xisaabtami karnaa astaamaha soo socda.
Tattoo-ka oo sii weynaada, ayaa waqti dheer ku qaadan doona farshaxanistaha inuu sawir ka sameeyo jirkeenna. Haddii aan dooneyno inaan helno tattoo daboolaya dhabarkayaga oo dhan, midab keliya, waxaan bixin karnaa qiyaastii 800-900 euro, halka hadaan doorano mid yar, wax ka yar cabirka gacanta, qiimaha badanaa waa qiyaastii 50-60 euro.
Tattoos gacanta oo dhan
Isticmaalka midabada waxay kordhisaa qiimaha taatuuga, Maaddaama aad rabto dhowr cirbadood oo kala duwan si looga fogaado isku darka midabada, marka lagu daro kakanaanta isku mid ah ayaa la kordhiyay iyo sidoo kale tirada saacadaha ee la qabanayo. Tattoo isku mid ah oo madow ah ayaa nagu kici kara qiyaastii 50-60 euro, haddii aan dooneyno midab ahaan qiimaheeda xitaa waa labanlaabi karaa.
Template, naqshad u gaar ah ama ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Goobaha lagu qoro tatooyada waxaan ka heli karnaa tiro badan oo arrimo ah oo noo oggolaanaya inaan si dhakhso leh u helno fikrad ah waxa aan ku qaban karno qolka saloonkan. Isticmaalidda qaab-dhismeedka noocan ah ayaa ah habka ugu jaban ee lagu tilmaamo tattoo cusub jirkeena. Haddii, dhinaca kale, aan qaadno naqshadeena, qiimaheeda ayaa kor u kacaya maaddaama ay ka baxsan tahay caadiga iyo farshaxanka tattoo waa inuu u hoggaansamo cabirka iyo rabitaanka isticmaalaha.
Laakiin haddii farshaxanku uu leeyahay sharaf la aqoonsan yahay, Waxaan dooran karnaa inaan ku siino gacan bilaash ah oo aan leenahay tattoo waxaad rabto oo la xiriira mowduuc. Xaaladahaas qiimaha ayaa kor u kacaya gaar ahaan haddii aan rabno naqshadeynta inay daboosho dusha weyn ee jirkeena sida dhabarka ama laabta.
Haddii aad runtii rabto inaad aragto waxa farshaxan yahan awood u leeyahay, waxa ugu fiican ee la sameeyo ayaa ah weydiiso buugiisa oo leh shaqooyinka ugu badan ee wakiillada ah Maxaad qabatay. Nasiib yar, waxaad awoodi kartaa inaad hesho qof caan ah oo soo maray qolka tattoo. Xirfadle kastaa wuxuu leeyahay qiime u gaar ah, laakiin waa inaan marwalba shaki galnaa hadii qiimaha ay na siinayaan uu aad u jaban yahay, maxaa yeelay tayada shaqada ma noqon karto sidii la filaayay.
Maskaxda ku hay in tattoos iyagu waa hab soo faaruq ah oo maqaarkayaga ah, taas oo u baahan dhowr talaabo oo fudud si looga fogaado in cudurada kugu dhaca. Xirfadle kasta oo adduunkan loo soo bandhigo wuxuu adeegsadaa galoofisyo, cirbado la tuuri karo, wuxuu nadiifiyaa qalabka marka tatuxu dhammaado ... Jaleecitaan fudud waxaan si dhakhso leh ku arki karnaa haddii ay la kulanto xaaladaha ugu yar ee nadaafadda.
Sidaan uga faalooday qodobka hore, Tatuuga ayaa ah hanaan faragelin ah oo haddii aan la ilaalin tallaabooyinka nadaafadda qaarkood, waxay sababi kartaa caabuqyo marka lagu daro gudbinta cudurada sida HIV ama cagaarshowga, waxay kaloo sababi kartaa infekshinka maqaarka isticmaalka midabbada oo mararka qaarkood noqon kara kansar. Midabbada qaar waxay ka koobnaan karaan kiimikooyin sun ah sida biraha culus ama hydrocarbons, markaa had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad la tashato xirfadle khibrad leh.
Tattoo-ka cagaaran wuxuu adeegsadaa nikkel iyo chromium, cadmium waxaa loo isticmaalaa jaalle, cusbada kuul-buluug ee buluug, birta oksaydhka loogu talagalay codadka ocher, titanium-ka cad iyo zinc oxide ayaa loo isticmaalaa. Waxaan sidoo kale heli karnaa midabbo dabiici ah oo iska caabintooda ay hooseyso iyo sidoo kale Waxay ku keeni karaan xasaasiyad xasaasiyadeed dadka qaarkood.
Sida aad u aragto, way adag tahay in la saxo qiimaha tattoo adoon ogayn nooca, meesha iyo sidaad u rabto. Haddii aad rabto inaad caawiso isticmaaleyaasha kale, noogu sheeg faallooyinka inta tattoo-kaaga kugu kiciyey oo shaki la'aan waxay noqoneysaa tixraac wanaagsan si aad fikrad uga hesho qiimaha la bixinayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Immisa ayey ku kacaysaa tattoo-ku?
Sidee looga saaraa timaha xubinta taranka?
Sharabaaddo aan la arki karin, saaxiibbada ugu habboon ee surwaalka canqowga